QT ao amin'ny Kingsoft Office | Avy amin'ny Linux
QT ao amin'ny Kingsoft Office
Variana amin'ireo teboka malemy aho GNU / Linux iray amin'ireo teboka ireo ny fiezahana hanana mpifaninana mivantana amin'ny Microsoft Office.
mihevitra aho fa Firefox y chrome mandresy amin'ny fihotsahan'ny tany ao amin'ny sokajy misy azy ireo ary andro vitsy lasa izay Niresaka izahay vaovao vadin'ny mampiasa QT .
Andro vitsivitsy lasa izay dia namangy ny pejin'ny Biraon'ny Kingsoft ho an'ny GNU / Linux (noho ny fahalianana liana foana no anaovako azy) ary hitako ny vaovao fa mitady mpandraharaha ny orinasa mba hanampy amin'ny fandikanteny isaky ny fiteny ary oh, gaga! Hitako fa ny Kingsoft Office GUI dia mampiasa QT.
Afaka mahita izany ianao amin'ity rohy ity.
Ny kaody manampy amin'ny fandikana ny Kingsoft Office dia misy amin'ny:
Ary koa, Kingsoft Office ALPHA 12 ho an'ny GNU / Linux dia misy izao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » QT ao amin'ny Kingsoft Office
Ahoana no nanjary lamaody ny QT. Noho ny antony.
Lahatsoratra tsara. Tsy fantatro io fampiharana io.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana Qt.
Voalohany, i Qt dia sehatra iampitana, mifanaraka tsara amin'ny JAVA sy ny fiteny C ++ hafa ho an'ny zavatra ampiasain'ny Kingsoft Office.
Satria ny Qt dia multiplatform, dia tsy mila mandà ny interface graphique ianao, satria ny tranomboky dia efa namboarina tamin'ny rafitra fiasa tsirairay.
Raha atao teny hafa, ny programa dia ho tsara amin'ny Windows, Mac OS, GNU / Linux, sns.
LibreOffice dia mila mampiasa patch patch satria ny tranombokiny taloha dia tsy mandeha amin'ny GNU / Linux ary mampiseho izany.
ny marina tsy haiko Office Kingsoft dia tsy mampiasa na inona na inona aho hitsiriritra ny winbug fa tena tsara ny fampidirana ary tsy nanana olana aho dia afaka mamorona antontan-taratasy ary mampita azy ireo amin'ny endrika winbug ary ny mifamadika amin'izany dia hampiasa azy ireo ao amin'ny U raha te-hijery teboka malemy ianao jereo varavarankely izay ho hitanao isan'andro sy isan-kariva ary tsy ho mankaleo anao mihitsy satria an-tapitrisany raha mitady teboka malemy ao amin'ny gnu / linux ianao mitady iray izay tena mendrika izany na manan-danja na safidy malalaka ho an'ny birao dia maro no iarahako maimaimpoana
ary ny Biraon'ny Kingsoft Manantena aho fa handeha tsara ary mbola hipoitra
Miditra ny biraon'ny Kingsoft izay mbola tsy nahavariana olona na iza na iza ny libreoffice.
Hey, manaitra ny interface Libreoffice… Amin'ny fomba ratsy, saingy mahavariana 😛
Miresaka momba ny biraon'ny birao izahay fa tsy windows vs gnu / linux.
Izaho dia mpanaraka mahatoky ny LibreOffice, manandrana manatsara ny sary masina ao aho.
Saingy ny fampidirana indrisy raha manao ny marina dia tsy tsara dia azonao jerena ao amin'ny boaty combo sy popup windows ao amin'ny GNU / Linux.
SIDEBAR dia mbola andrana ary manana lesoka maro.
Raha misy zavatra tadiaviko dia indray andro ny LibreOffice dia manana quota ho an'ny mpampiasa FIREFOX ohatra ary ny Office dia manana fiafarana mitovy amin'ny an'ny mpizaha EXPLORER.
Nelson lombardo dia hoy izy:
Hatreto dia misy tetik'asa manan-danja kokoa hiasa. Mila manome baolina amin'ny hadalana izany ...
Valiny tamin'i Nelson Lombardo
Iza no tsara kokoa: Mampiasà rafitra na kitapo? Marina indrindra.
Well Qt dia ho lamaody izao fa fantatrao fa ho tonga eo am-pelatanan'i Microsoft izy io, efa nividy ny zanatany finday Nokia izy, amin'ny farany hividy ny zava-drehetra izy; ary fantatrao hoe iza no manana Qt.
Mifikitra amin'ny GTK aho izay vokatra GNU ary tsy an'ny olon-kafa.
Marina, saika hadinoko fa ny QT dia eo am-pelatanan'ny Nokia. Fihetsiketsehana ratsy, manontany tena aho izao raha toa ka hisy zavatra mitovy amin'ny zava-nitranga tamin'ny OpenOffice sy MySQL hitranga aorian'ny nividianan'ny Oracle ny Sun. Manantena fotsiny aho fa ny vondrom-piarahamonina mpamorona QT dia tsy mizarazara noho ny fividianan'i Microsoft an'i Nokia.
Heveriko fa izao mihoatra ny taloha ny antony voalohany namoronana ny Gnome niaraka tamin'ny GTK dia misy dikany betsaka, hiantohana ny fahalalahan'ny rindrambaiko.
Amena ny zavatra farany lazainao, ny fisehoan'ny Gnome sy Gtk dia tsy an-kifonofono, raha tsy noho izay lazainao, na mihoatra na kely.
Diso izy ireo, natomboka ny tetikasa Gtk satria tamin'ny voalohany dia tsy afaka ny Qt. Izay niova tanteraka izao, mora kokoa ny mampiditra kaody ao amin'ny tetik'asa Qt toy izay mankany Gtk: s. Ho fanampin'izay, tsy tompon'andraikitra intsony i Nokia hatramin'ny nanovana ny CEO farany, Digia lasa tompon'andraikitra amin'ny Qt ary nilaza izy ireo fa hitazona ny politikam-pampandrosoana ihany.
Mamaly an'i carcaman
Nokia dia namidy ny Qt tamin'i Digia herintaona lasa izay.
Ankoatr'izay, ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana dia manana fivoarana Qt maimaim-poana izay ampiasaina amin'ny KDE sy ny fampiharana azy.
Nahazo fahazoan-dàlana samihafa i Digia. QPL ho an'ny fampiharana ara-barotra sy GPL V2 / V3 ho an'ny fampandrosoana rindrambaiko maimaimpoana.
Raha manova ny politikan'ny fahazoan-dàlana Digia rahampitso.
Ny fanapahan-kevitra dia tsy hisy fiatraikany amin'ny fampandrosoana Qt ho an'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Na izany na tsy izany dia mbola tsy tiako ny an'ny orinasa rehetra, na digia, trolltech (inona ny anarana) na nokia. Tsy an'ny olon-kafa ny GtK.
PD Nokia dia mbola manana ny votoatin'ny fampandrosoana sy ny zon'ny mpamorona ny Qt.
Averiko ihany, ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana dia manana fivoarana Qt maimaim-poana izay ampiasaina amin'ny KDE sy ny fampiharana azy.
Ireo tranomboky rehetra ireo dia eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL. Raha tianao dia anontanio i Elav sy ireo tovolahy hafa izay mampiasa KDE.
Azoko lazaina amin'ny antony marim-pototra fa ny fampandrosoana gtk dia mihidy kokoa noho ny an'ny Qt, satria ny fanapahan-kevitra rehetra dia nandalo ny fahatsoran'i Red Hat. Fantatro ny olona nampakatra fanovana tao amin'ny Qt ary nekena izy ireo tsy nisy olana ary olon-kafa te hampiditra fanamboarana bibikely any amin'ny Gtk ary tsy nanaiky izany velively izy ireo raha tsy nanome fanazavana manokana.
Io dia an'ny vondrom-piarahamonina iray (izay diso ihany koa), tsy midika akory fa ekenao ho any ambony ny zavatra arosonao, raha ny fampiharana dia tsy misy fahasamihafana eo amin'ny gtk sy ny qt, afa-tsy ny gtk dia voafetra arivo heny kokoa.
Nokia dia nanapa-kevitra momba ny tetikasany rehetra mifototra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ao anatin'izany ny Qt, izay namidy tamin'i Digia, meego ankoatry ny hafa.
Nokia sy qt dia tsy misy ifandraisany
mpaka an-keriny dia hoy izy:
Tsy eo am-pelatanan'i nokia i Qt ... eo an-tanan'i Digia izy ary mino aho fa hamotsotra an'io akoho kely mametraka ny atody volamena io.
Mamaly an'i raptor
Ny tsy azoko satria tsy mampivondrona ny ezak'izy ireo. Fanontaniana iray maimaimpoana ny biraon'ny Kingsoft ???
Novakiako teo fa tsy ...
Heveriko fa tokony hisy ny marimaritra iraisana, satria ny tsy fananana fomba hafa dia ratsy sy ratsy kokoa noho ny safidy be loatra. Ny tsara indrindra eritreretiko dia ny farafahakeliny misy safidy 3 isaky ny zavatra, ary samy hafa tsara ireo.
Izy io dia rindrambaiko maimaimpoana ao anaty fonosiny (MAIMAIMPOANA) saingy tsy maimaim-poana.
Toy izany koa no hita amin'ny mpitety tranonkala. Maimaimpoana ny OPERA fa tsy maimaim-poana.
PICASA, FLASH ADOBE, ADOBE READER dia maimaim-poana fa tsy maimaim-poana.
Tsy maimaimpoana i KingSoft. Izy io dia freeware amin'ny kinova fototra.
Tsy azoko mihitsy hoe maninona ny efitrano fiasan'ny birao toa ny Kingsoft / WPS Office sy Google Docs no manana fifanarahana tsara kokoa amin'ny M $ Office tsy toy ny Open / LibreOffice, izay tetikasa iray manana traikefa an-taonany maro, vondrom-piaraha-miasa marobe izay efa fanatsarana sns. Avy eo dia nanjary fantatra tampoka tao amin'ny birao WPS izy ary nihoatra izany tamin'ny fifanarahana sy ny fampisehoana niaraka tamin'ny M $ Office.
Fa maninona no?
Eny, hoy ny olon-drehetra Oh, tsara tarehy tokoa ny Office Kingsoft, tsara ny mijery azy, toy izany sy toy izany. Fa ny zava-dehibe? Mifanaraka amin'ny OpenDocument doc, docx, xlxs ...
Tsy misy milaza fa raha manokatra takelaka misy rijan-teny tsy amin'ny teny Anglisy ianao, simba daholo ve ny zava-drehetra, sa manaiky azy ireo?
Ny zavatra hitako dia izay ataoko pirinty?
Mila mijery mihoatra ny bika aman'endriny ianao ary mamakafaka ny tena vidin'ity birao ity.
PS: Tsy rindrambaiko maimaimpoana io, na openource, fa raha tianao handika maimaimpoana ny automatisation an'ny birao izy ireo.
Ny tombony azo amin'ny Kingsoft Office:
-Mifanaraka tsara amin'ny Microsoft Office
-Nice ny interface (raha ny marina dia klone saika ny MS Office)
-Maimaimpoana (freeware), tsy mila licence ianao
-Mahazavana ny habeny (120MB eo ho eo tsy toy ny MS Office izay manodidina ny 4GB DVD).
-Mba mandany loharanom-bola kely noho ny LibreOffice, mihazakazaka haingana kokoa.
-Ny endrika marobe (ao anatin'izany ny GNU / Linux)
-Ny olona avy amin'ny MS Office dia mora kokoa ny mampifanaraka amin'ny Office Kingsoft noho ny amin'ny LibreOffice, satria mitovy ny endriny.
Ny fatiantoka ny Office Kingsoft:
-Tsy afaka io
-Tsy manohana OpenDocument io
PS: Manana ny birao WPS ihany koa izy izay Office Kingsoft (avy amin'ny mpamorona iray ihany) miaraka amin'ny tsy fitovizany amin'ny teny anglisy fa tsy amin'ny teny sinoa.
WPS no anarana voalohany an'ny Kingsoft Office, izay fanafohezana ny fampiharana: Wfombafomba, Plolom-po ary Spreadsheet. Matetika ny fisoratana anarana sinoa dia manana anarana ho an'ny Tandrefana izay tsy mitovy amin'ny mitovy aminy amin'ny fitenin'izy ireo. Na izany aza, misy ny fangatahana antsoina QQ, izay rafitra fandefasan-kafatra avy hatrany izay nipoitra ho klone an'ny ICQ, saingy taty aoriana dia nivoatra ho lasa rafitra fandefasan-kafatra avy hatrany izay eo amin'ny ambaratongan'ny Windows Live Messenger efa nihena ankehitriny saika ho an'ny rehetra.
Heveriko fa mahazatra ho azy ireo ny mangataka dikanteny, raha mizara maimaim-poana ilay programa izy ireo. Ny olana hafa dia ny fiampangana azy ireo.
Mijanona miaraka amin'ny libreoffice aho, tsy mbola nanana olana mifanentana, ampiasaiko amin'ny asa any U ary hamaky torolàlana izay ampitondrany ahy avy any U, avy amin'ny birao $ ka hatrany amin'ny birao ary avy amin'ny libreoffice mankany amin'ny birao $ ho ahy, tsy manana fitarainana aho, mifanaraka amin'ny ampiasako azy io sokafy ny fanovana ary mamoròna tetikasa fitarihana antontan-taratasy sns ary ho ahy faingana dia tsy hitako fa mifanentana miadana izy mandraka ankehitriny na olana sy ireo sary masina ary ilay makiazy izay manome tsiny ny zava-tsy misy fangarony ireo fampiharana tsara tarehy indrindra miaraka amin'ny ratsy indrindra raha tianao ny fampiharana tsara tarehy dia mankanesa any amin'ny winbug Tsy tsara tarehy ny fampiharana maimaimpoana fa manatanteraka tsara ny tanjon'izy ireo
Nampiasa ny Kingson Office ho an'ny GNU / Linux aho hatramin'ny nivoahan'ny dikan-teny anglisy. Manantena aho fa mahavita manampy ny fanohanana OpenDocument izy ireo, satria miasa fahagagana ny OOXML.
Efa nampiasa QT aho taloha ary haingana be kokoa noho ny LXDE dia tena mamporisika azy betsaka aho!
Izy io dia misy mifanentana bebe kokoa noho ny LibreOffice / OpenOffice, nahagaga ahy ny safidy tsara hafa ary raha manatsara hatrany izy io dia afaka mamaha ny fifaninanana.
Stogram, mpanjifa Instagram miampita sehatra
Pills mena miaraka amin'ny sianide, fizarana 3: mitady ary Yacy